Crizotinib အမှုန့် (877399-52-5) | anaplastic lymphoma kinase inhibitor
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Crizotinib အမှုန့် (877399-52-5)
SKU: 877399-52-5. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Crizotinib မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (877399-52-5) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Crizotinib အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Crizotinib အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 197-203 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကင်ဆာကုသမှုကိုအသုံးပြုမှုအတွက် Crizotinib အမှုန့်
Crizotinib အမှုန့်, Xalkori အမှုန့်
Crizotinib အမှုန့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားခြင်းနှင့်ပြန့်ပွားနှောင့်ယှက်မယ့်ကင်ဆာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ Crizotinib အမှုန့်ကို non-သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Crizotinib အမှုန့်တစ် tyrosine kinase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ anaplastic lymphoma kinase (ALK) လို့ခေါ်တဲ့အင်ဇိုင်းပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Crizotinib အမှုန့်သာ ALK တစ်ခု overactive ဗားရှင်းရှိသည်ကင်ဆာဆဲလ်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။5အတွက် 100 အကြောင်း NSCLC နှင့်အတူလူ (5%) ဒီရှိသည်။ ဒါဟာ ALK အပြုသဘောရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။
သင်၏ဆရာဝန်ကိုသင် ALK အပြုသဘောဆောင်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့အသေးဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာချီတက်ခဲ့ကြလျှင်သင် Crizotinib အမှုန့်များအကြံပြုပေလိမ့်မည်။
XALKORI အမှုန့်တောင့ 250 ်ပုံနှိပ် Hard-shell ကိုတောင့အဖြစ်ထောက်ပံ့နေကြသည်အတူတကွ colloid ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, microcrystalline cellulose, anhydrous dibasic ကယ်လစီယမ်ဖော့စဖိတ်, ဆိုဒီယမ်ကစီဓါတ် glycolate, မဂ္ဂနီဆီယမ် stearate နှင့်မလှုပ်မရှားပါဝင်ပစ္စည်းများအဖြစ်ခက်ခဲ gelatin ဆေးတောင့်ခွံနှင့်အတူ MG သို့မဟုတ် Crizotinib မှုန့် 200 မီလီဂရမ်။
အဆိုပါပန်းရောင်ဒီလိုပါပဲဆေးတောင့် shell ကိုအစိတ်အပိုင်းများ gelatin, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အနီရောင်သံအောက်ဆိုဒ်ဆံ့။ အဖြူရောင်ဒီလိုပါပဲဆေးတောင့် shell ကိုအစိတ်အပိုင်းများ gelatin နှင့်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါရှိသညျ။ အဆိုပါပုံနှိပ်ခြင်းမှင် shellac, propylene glycol, ခိုင်မာတဲ့အမိုးနီးယားဖြေရှင်းချက်ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့်အနက်ရောင်သံအောက်ဆိုဒ်ပါရှိသည်။
Crizotinib အမှုန့်တစ်ဦးဆေးတောင့်သည်။ သငျသညျရေဖန်ခွက်နှင့်အတူကတပြင်လုံးကိုမျိုချ။ သင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အစားအစာမရှိဘဲရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျ ပို. ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမဟုတ်, လက်ျာထိုးယူသင့်ပါတယ်။
သငျသညျတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ယူ - တစ်ချိန်ကနံနက်ယံ၌နှင့်တစ်ချိန်ကညဦးယံ၌။
သငျသညျကုသမှုမစတင်မီနှင့်သင့်ကုသမှုကာလအတွင်းအသွေးတော်စမ်းသပ်မှုရှိသည်။ သူတို့သွေးထဲမှာသွေးဆဲလ်နှင့်အခြားတ္ထုများသင်တို့၏အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးပါ။ သူတို့ကအစသင့်ရဲ့အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပါ။
ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများတချို့သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုယူပြီးနေကြသည်ဆိုဆေးဝါးများအကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးပြောပြပါ။ ဒါကဗီတာမင်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တန်ပြန်ကုစားကျော်ပါဝင်သည်။
ဤသည်မူးယစ်ဆေးအမိဝမ်းထဲမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်ဤမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကုသမှုရှိခြင်းနှင့်ထိုနောက်ကအနည်းဆုံး3လကြာနေစဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်ဖခင်တစ်ဦးကလေးသည်ဖြစ်လာမှမဟုတ်အရေးကြီးသည်။ ကုသမှုမစတင်မီထိရောက်သောဓတေားအကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုပြောဆိုပါ။
ကျနော်တို့ကဒီကုသမှုကလေးမွေးဖွားကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်ဖခင်တစ်ဦးကလေးကဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အနာဂတျတှငျကလေးရှိသည်ဖို့လိုပေမည်ထင်လျှင်ကုသမှုကိုစတင်ရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။
သငျသညျသွားများပြဿနာများအပါအဝင်တခြားဘာမှများအတွက်ကုသမှုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းသင်ဤကုသမှုရှိခြင်းနေဆရာဝန်တွေ, သူနာပြု, ဆေးဝါးသို့မဟုတ်ဆရာကတခြားပြောပြပါ။
သငျသညျကုသမှုရှိခြင်းနှင့်ထိုနောက်ကအနည်းဆုံး6လကြာနေစဉ်တွင်တိုက်ရိုက်ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းမရှိကြပါဘူး။
အခြားကာကွယ်ဆေး -have, ဒါပေမဲ့သူတို့သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းသလောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုမပေးစေခြင်းငှါ,
ပါးစပ် (ခံတွင်းကာကွယ်ဆေး) ကယူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကာကွယ်ဆေးဖူးသောသူတို့နှငျ့အတူအဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါကကလေးအားဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးပါဝင်သည်။ အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတက်2မှပတ်ကလေးရဲ့ဆီးထဲမှာတည်သည်နှင့်သင်နေမကောင်းစေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်2ရက်သတ္တပတ်အဘို့မိမိတို့ nappies ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှောင်ကြဉ်ပါ။ သို့မဟုတ်တစ်ခါသုံးလက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာနောက်မှသင်၏လက်ဆေးကြောပါ။
XALKORI အမှုန့် (Crizotinib အမှုန့်) တစ်ဦးပါးစပ်အဲဒီ receptor tyrosine kinase inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ Crizotinib အမှုန့်များအတွက်မော်လီကျူးပုံသေနည်း C21H22Cl2FN5O ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်လီကျူးအလေးချိန် 450.34 Dalton ဖြစ်ပါတယ်။ Crizotinib အမှုန့် (R) -3- [1- (2,6-Dichloro-3-fluorophenyl) ethoxy] -5- [1- (piperidin-4-yl) -1H-pyrazol-4-yl] pyridin- အဖြစ်ဓာတုဗေဒဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 2-Amin ။
Crizotinib အမှုန့်တစ် 9.4 ၏ pKa (piperidinium စုံလုံ) နှင့် 5.6 (pyridinium စုံလုံ) နဲ့ဖြူဖပ်ဖြူရော-အဝါရောင်အမှုန့်တစ်အဖြူသည်။ aqueous မီဒီယာ Crizotinib အမှုန့်များ၏နိုင်မှု 1.6 မီလီဂရမ် / mL ထက်လျော့နည်းဖို့ 8.2 မီလီဂရမ် / mL ထက် သာ. ကြီးမြတ်ထံမှသော pH 10 ဖို့အကွာအဝေးသော pH 0.1 ကျော်လျော့နည်းစေပါသည်။ သော pH 7.4 မှာဖြန့်ဖြူးကိန်း (octanol / ရေ) ၏ log ကို 1.65 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးမတည့်တုံ့ပြန်မှု၏ဤနိမိတ်လက္ခဏာမဆိုရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုရယူပါ: အသင်းအဖွဲ့ချုပ်; ခက်ခဲအသက်ရှူ; သင်၏မျက်နှာရောင်ရမ်းခြင်း, နှုတ်ခမ်း, လျှာ, သို့မဟုတ်လည်ချောင်း။
ပြင်းထန်မူးဝြေခင်း, မပျက်, အစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ် pounding နှလုံးခုန်;
ထိုကဲ့သို့သောမှုန်ဝါးရူပါရုံကဲ့သို့ရူပါရုံကိုပြဿနာများ, အလင်းရန်သင့်မျက်စိ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်, ဒါမှမဟုတ်အလင်းသို့မဟုတ် "floaters" ၏တောက်ကိုမြင်လျှင်,
ရင်ဘတ်နာကျင်မှုခြောက်သွေ့ချောင်းဆိုးသို့မဟုတ်ချွဲ, အသက်ရှူကြပ်, အသက်ရှုတိုတောင်း feeling တွေနဲ့ချောင်းဆိုး; လွယ်ကူသောကွိတျ, ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက် ...
Crizotinib အမှုန့်ရော် Powder
AASraw ထံမှ Crizotinib အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Crizotinib အမှုန့်ရော် Powder ချက်ပြုတ်နည်း
Crizotinib အမှုန့် (877399-52-5) Anti-ကင်ဆာအေးဂျင့်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်
Osimertinib (AZD-9291) အမှုန့်